Infinix na-ekwupụta Hot 9 na Hot 9 Pro: Abụọ etiti na Helio P22 na nnukwu batrị | Gam akporosis
Infinix ekwuputala ekwenti ohuru abuo mgbe o gosiputara ihe ngosi 7 na Note 7 Pro na onwa April. Onye nrụpụta ahụ na-eweta etiti abụọ na nnukwu panel na atụmatụ ndị ga-enye ezigbo arụmọrụ na njedebe na ọpụpụ ya na India ịmalite June 5.
Infinix Hot 9 na Infinix Hot 9 Pro Ewubere ha na ntọala dị mma, imewe ahụ akpachapụrụ anya nke ukwuu ma ha gosipụtara agba ha na-acha anụnụ anụnụ na odo odo. Companylọ ọrụ dị na Hong Kong ga-ebu ụzọ malite ha n'ahịa India ma gazie na mpaghara ndị ọzọ.
1 Ya mere bụ ihe ọhụrụ Hot 9 na Hot 9 Pro
Ya mere bụ ihe ọhụrụ Hot 9 na Hot 9 Pro
El Infinix na -ekpo ọkụ 9 dika ya Infinix Hot 9 Pro nwere ihuenyo 6,6-inch site na HD + mkpebi, akụkụ akụkụ nke 20: 9 na oghere a kụrụ ọkpọ na akuku aka ekpe elu maka igwefoto selfie 8MP. Ugbua na azụ ọ na - etinye nyocha capacitive dị ka onye na - agụ akara mkpisiaka.
Ha abụọ tinyekwara otu nhazi ahụ, Helio P22 sitere na MediaTek, 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa na ohere nke ịgbasa ya site na MicroSD. Batrị ahụ bụ 5.000 mAh na ụgwọ 10W na ngwanrọ ahụ bụ gam akporo 10 na ụdị XOS 6.0 na mgbakwunye na ọtụtụ ngwa ụlọ ọrụ.
Ihe dị iche nke smartphones ndị a dị na isi ihe mmetụta azụ, Hot 9 nwere oghere 13 megapixel, ebe Hot 9 Pro nwere ihe mmetụta 48pipixel. Ugbua atọ na-eso ha bụ otu: 2 MP macro sensor, 2 MP omimi mmetụta na raara onwe ya nye ihe mmetụta dị ala.
El Infinix Hot 9 bịarutere maka INR8,499 (ihe dị ka euro 100 iji gbanwee) na Infinix na -ekpo ọkụ 9 Pro Ọ na-apụta maka INR9,499 (euro 112). Ha abụọ rutere site na June 5 n'ụdị agba abụọ, acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo na ekweisi agbakwunyere na igbe ahụ, chaja na nchebe maka ogwe IPS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Infinix na-ekwupụta Hot 9 na Hot 9 Pro: Ebe etiti abụọ na Helio P22 na nnukwu batrị
A na-emelite Huawei Watch GT2 na GT2 Lite ka ha bụrụ ezigbo enyi nke igwefoto igwe